किन यति धेरै झुक्नुभएको कमरेड ? – ramechhapkhabar.com
किन यति धेरै झुक्नुभएको कमरेड ?
केही दिनअघि नेपाल भारत संयुक्त आयोगको छैठौं बैठकमा भाग लिन भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली पुग्नुभएका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले त्यहाँका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहसँग भेटवार्ता गर्न जाने क्रममा सिंहको दैलोमा देखाउनुभएको अस्वाभाविक भाव र बडी ल्याङ्वेजले सबैलाई खिन्न बनाएको छ । पदीय हैसियत समान भएका मन्त्रीसँग भेट गर्न गएका ज्ञवालीले उल्टै सिंहलाई अस्वाभाविक हाउभाउमा झुकेर र नतमस्तक पाराले नमस्कार गरेको प्रष्ट देखिन्छ । उक्त तस्विरलाई भारतीय अखबार र सञ्चार माध्यमहरूलेसमेत प्रमुखताकासाथ प्रकाशित गरेका थिए ।
कोरोना महामारीको समयमा भएको भेटवार्तामा दुवैले मास्क लगाएपनि सिंहले ज्ञवालीलाई थुम्थुमाएको वा आश्वासन दिएझैँ गरी दुबै हात समातेर केही भनिरहेको देखिन्छ । ज्ञवाली भने ‘हवस्’ पारामा सिंहको कुरा र सुझावलाई नतमस्तक पाराले सुनिरहेको तस्बीरले भान पारेको छ । ‘उक्त दृश्य काम बिराएर र वा गल्ति गरेकोलाई अर्काले माफि गरेकोझैँ देखिने’ एकजना मनोविद्को धारणा रहेको छ ।
माघ २ गते भएको दुवै मुलुकका परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय वार्तामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषय जोडदार ढंगले राख्ने ज्ञवालीले काठमाडौंबाट प्रस्थान गर्नुअघि गर्नुभएको वाचासमेत पानीको फोका सरह बनेको थियो । प्रधानमन्त्री मोदीसँग भेटको लागि अनेक प्रयत्न गरेपनि समय नपाएपछि काठमाडौंको लागि उड्नु केही घण्टाअघि ज्ञवालीले होटल ताजबाट निस्केर सिंहको सरकारी निवासमा भेट गर्नुभएको हो । सिंह तिनै मन्त्री हुन् जसले गतवर्ष लिपुलेकमा भारतले एकतर्फी रूपमा बनाएको सडक नयाँ दिल्लीबाटै उद्घाटन गरेका थिए ।
संसद विघटनपछि नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा उत्पन्न असहज र अस्वाभाविक राजनीतिक तरङ्गको बीचमा भएको ज्ञवालीको भ्रमणलाई भारतले सीमित दायरामा खुम्चाउन चाहेको सन्देश समेत दिएको छ । राजनाथसँगको उक्त तस्बिर र प्रधानमन्त्री मोदीले भेटघाटको लागि नगरेको वास्ता त्यसैको द्योतक रहेको चर्चा राजनीतिक तथा कुटनीतिक क्षेत्रमा व्याप्त छ ।